CAYAARAHA - News WordPress theme
Category Archives: CAYAARAHA
Bayern Munich oo ka wal walsan dhaawicii halista ahaa ee xalay soo gaaray Kingsley Coman
(Munich) 25 Agoosto 2018 Bayern Munich ayaa xalay 3-1 ku garaacday kooxda Hoffenheim kulan ka tirsanaa horyaalka jarmalka ee Bundesliga. Laakiin kooxda ayaa kulankaas ku waysay laacib muhiim u ah kaas oo ah Kingsley Coman, waxaana la sheegayaa in dhaawiciisu uu yahay mid aad halis u ah. War ka soo baxay Bayern Munich ayaa lagu…
Tottenham oo ganaax wayn u diyaarisay Hugo Lloris kadib markii laga soo daayay Xabsiga!
(London) 25 Agoosto 2018 Maamulka Tottenham ayaa ka arinsanaya falkii uu ku kacay kabtankooda Hugo Lloris kaas oo la qabtay habeenkii khamiista isaga oo cabsan. 31 jirkaan reer France ayaa la qabtay isaga oo cabsan oo gaari kaxayna taas oo mamnuuc ka ah gudaha dalka ingiriiska. Idaacada Faransiiska ee RMC ayaa baahisay in maamulka Tottenham…
Lucas Vazquez oo qaati ka taagan tababare Julen Lopetegui (Maxaa dhacay?)
(Madrid) 25 Agoosto 2018 Xiddiga garabka weerarka uga ciyaara Real Madrid ee Lucas Vazquez ayaa qaati ka taagan tababaraha cusub ee kooxdiisa. 27 jirkaan ayaa soo muujiyay inuusan ku qanacsanayn sida uu wax u wado tababare Julen Lopetegui tan iyo markii loo dhiibay kooxda sida ay baahisay Marca. Tababare Julen Lopetegui ayaa ka saaray Vazquez…